Mamy sy tsindrin-tsakafo maraokana mahazatra | Fitsangatsanganana tanteraka
Isabel | | Maraoka
Ny iray amin'ireo lafiny maneho ny kolontsain'ny firenena iray dia ny gastronomie. Ilay iray avy any Maroc dia manana akora be dia be sy sakafo isan-karazany noho ny fifanakalozana kolontsaina marobe nananan'ny firenena tamin'ny olona hafa nandritra ny tantara toa ny Berber, ny Arabo na ny kolontsaina Mediteraneana.
Izy io, noho izany, dia gastronomie voadio nefa tsotra miaraka amin'izay, izay mampiavaka ny fifangaroan'ny tsiro mamy sy masira ary koa ny fampiasana zava-manitra sy zava-manitra.
Fa raha fantatra amin'ny zavatra iray ny gastrolojia marokana, dia ho an'ny tsindrin-tsakafo mahafinaritra. Raha maniry handrahoana nify ianao ary manana nify mamy, aza adino ity lahatsoratra manaraka ity izay hijerenay ny sasany amin'ireo zava-mamy indrindra eto Maraoka.
1 Inona avy ireo akora ampiasaina amin'ny mofomamy maraokana?
2 Vatomamy maraokana 10 ambony
2.3 Tandrok'i Gazela
Inona avy ireo akora ampiasaina amin'ny mofomamy maraokana?
Ny zava-mamy marokanina dia vita amin'ny lafarinina, semolina, voanjo, tantely, kanelina ary siramamy indrindra. Ny fampifangaroana ireo akora ireo dia niteraka resipeo malaza be izay nivelatra haingana manerantany.
Ao anatin'ireo boky fahandro isan-karazany momba ny zava-mamy Maraokana dia misy lovia maro, fa raha mbola tsy nanandrana ny specialites-n'izy ireo ianao, dia tsy hadino izany sakafo matsiro izany.
Vatomamy maraokana 10 ambony
Iray amin'ireo tsindrin-tsakafo kintana amin'ny sakafo Afovoany Atsinanana izay niampita sisintany. Any Torkia no niandohany, fa rehefa niely nanerana an'izao tontolo izao izy, dia nisy karazany maro samihafa nipoitra izay nampiditra karazana voanjo isan-karazany.
Vita amin'ny dibera, tahini, vovo-kanelina, siramamy, kennel ary koba phyllo izy io. Ny dingana farany aorian'ny nahandro dia ny fandroana amin'ny tantely hahatrarana tsindrin-tsakafo miaraka amina tsiro mamy tena mampiavaka azy miaraka amina endrika masiaka azo avy amin'ny fampiasana voanjo sy pastry filo.
Tsotra be ny fomba fahandro ary afaka manomana azy mora foana ao an-trano ianao. Raha te hanompo azy dia tsy maintsy tapahina amin'ny ampahany kely izy io satria tsindrin-tsakafo tsy miovaova. Na dia tsy avy any Maghreb aza izy io, dia iray amin'ireo zava-mamy indrindra lany daty ao Maroc.
Sary | Wikipedia avy amin'i Indiana Younes
Iray amin'ireo zava-mamy marokana malaza indrindra, indrindra ny ankizy, ny Seffa. Sakafo malala ao amin'ny firenena izy io ka manana ny endriny masira sy mamy. Matetika izy io dia atao amin'ny fotoan'ny daty manokana, amin'ny fivorian'ny mpianakavy, rehefa teraka ny zaza na koa amin'ny fampakaram-bady.
Ho fanampin'izay dia tena tsotra ny miomana ka tsy mila mandany fotoana be ao an-dakozia. Azo hanina ho sakafo maraina koa izy io satria feno lozisidra sarotra io lovia io izay miteraka angovo maharitra, izay manome ny zavatra rehetra ilainao hiatrehana andro lava any am-piasana.
Mba hanomanana ny kinova Seffa mamy dia ny coodcous kely na paty vary, dibera, amandy voadidy, siramamy amam-bolo ary kanelina no hany ilainao. Na izany aza, misy ihany koa ireo manampy daty, voasarimakirana, sôkôla, pistachios na voasarimakirana satria lovia iray azo ovaina amin'ny tsiron'ny fianakaviana amin'ny alàlan'ny fanampiana akora hafa.
Seffa dia iray amin'ny zava-mamy marokana mahasalama indrindra satria ny couscous dia misy fibra betsaka, mety amin'ny fanadiovana ny vatana. Ankoatr'izay, ny amandy dia manana kalsioma betsaka. Raha fintinina, ny ampahan'ny Seffa dia safidy tena ilaina hanarenana ny baterinao amin'ny fomba mahasalama sy matsiro.
Sary | Okdiario
Ny iray amin'ny zava-mamy marokana indrindra indrindra dia ny tandroka kabalgazal na gazelle, karazana dumpling manitra feno amandy sy zava-manitra izay mampahatsiahy ny tandrok'io biby io izay ny tontolo Arabo dia mifamatotra amin'ny hatsarana sy ny hakantony.
Ity tsindrin-tsakafo miolakolaka malaza ity dia iray amin'ny zava-mamy marokana nentindrazana indrindra ary matetika ampiarahana amin'ny dite amin'ny fotoana manokana.
Tsy dia sarotra ny fanomanana azy. Atody, lafarinina, dibera, kanelina, siramamy, ranom-boasary ary voasarimakirana no ampiasaina amin'ny koba mamy. Etsy ankilany, ho an'ny paty ao anaty tandroky ny gazela, amandy vita amin'ny tany sy rano voninkazo voasary no ampiasaina.
Sary | Sakafo Maroquin
Fantatra amin'ny anarana hoe «churro maraokana», sfenj dia iray amin'ny zava-mamy marokana indrindra, izay hitanao amin'ny fivarotana amoron-dàlana maro amin'ny tanàna rehetra amin'ny firenena.
Noho ny endriny dia mitovy amin'ny donut na donut izy ary aterina amina tantely na siramamy vovoka. Maka azy io ho toy ny aperitifa ny maraokanina, indrindra amin'ny misasakalina miaraka amina dite matsiro.
Ny akora ampiasaina hanamboarana ny sfenj dia masirasira, sira, lafarinina, siramamy, rano mafana, menaka ary siramamy mangatsiaka dia hafafy ao ambony handravahana.
Iray amin'ireo lovia matsiro indrindra amin'ny sakafo Alahuita ihany koa ny briwats, sakafo kely mofomamy kely azo nofenoina paty masira (tuna, akoho, zanak'ondry ...) ary mamy ary matetika no aroso amin'ny fanasana sy fety.
Amin'ny endriny mamy, ny briwats dia iray amin'ireo zava-mamy marokana nentim-paharazana. Mofomamy kely miendrika telozoro izy ary mora ny manomana ny koba mamy. Mikasika ny famenoana, ho an'ny fikarakarana rano voninkazo voasary, tantely, kanelina, amandy, dibera ary kanelina no ampiasaina. Fifaliana!
Iray amin'ireo zava-mamy marokana malaza indrindra koa ny trid, izay fantatra koa amin'ny anarana hoe "mofom-pahantrana." Matetika izy io dia alaina amin'ny sakafo maraina miaraka amina dite na kafe iray vera. Tsotra nefa be ranony.
Noho ny herin'ny sakafo mahavelona azy ireo, ny chebakias dia iray amin'ireo zava-mamy marokana malaza indrindra hamaky ny fifadian-kanina amin'ny Ramadany. Malaza tokoa izy ireo ka mahazatra ny mahita azy ireo any amin'ny tsena na fivarotana mofomamy ao amin'ny firenena ary ny fomba tsara hanandramana azy ireo dia amin'ny kafe na dite mint.
Izy ireo dia vita amin'ny koba lafarinina varimbazaha izay novolavolaina mba hanendasana ary aroso anaty ravina mihorona. Ny fikasihan'ny chebakias tany am-boalohany dia omen'ny zava-manitra ampiharina aminy, toy ny safrona, ny vonin'ny volomboasary, ny kanelina na ny amory. Farany, rakotra tantely ity tsindrin-tsakafo ity ary ahosotra amin'ny sesame na sesame. Fahafinaretana ho an'ireo izay tia tsindrin-tsakafo misy tsiro mahery.
Sary | Vganish
Ity dia iray amin'ireo zava-mamy lozisianina marikana tsy azo tohaina indrindra. Crispy ety ivelany ary be ranony ao anatiny, ity dia mofomamy avy any Moyen Orient vita amin'ny volon'ny anjely, dibera nohazavaina ary fromazy akawi ao anatiny.
Vantany vao masaka dia esorina amin'ny syrup manitra rosewater ny kanafeh ary hafafina amin'ny kennel, amandy na pistachios. Ity tsindrin-tsakafo matsiro ity dia tena mahasoa ary hitondra anao any Moyen orient avy amin'ny manaikitra voalohany. Natao indrindra tamin'ny fialantsasatry ny Ramadany izy io.
Sary | Wikipedia avy amin'i Mourad Ben Abdallah
Na dia any Algeria aza no niandohany, makrud dia lasa iray amin'ireo zava-mamy marokana malaza indrindra ary mahazatra any Tetouan sy Oujda.
Mampiavaka azy ny fananana endrika diamondra ary ny koba nataony avy amina semolina varimbazaha, nendasina rehefa avy nofenoina daty, aviavy na amandy. Ny fikasihana farany dia omena amin'ny fandroana ny makrud amin'ny rano voninkazo sy volomboasary. Mahafinaritra!
Sary | Craftlog
Iray amin'ireo zava-mamy marokana izay aroso amin'ny karazana fety rehetra ny feqqas. Izy ireo dia mofomamy mamy sy voatoto izay vita amin'ny lafarinina, masirasira, atody, amandy, rano voninkazo voasary ary siramamy. Azon'izy ireo atao ny mihinana irery na amin'ny fampidirana voaloboka, voanjo, anis na voa sesame amin'ny koba.
Ny feqqas dia miavaka amin'ny tsirony malefaka mifanaraka amin'ny lanilaniny rehetra. Ao amin'ny Fez dia fomba fanao ny manolotra tapa-feqqas miaraka amin'ny ronono lovia iray ho sakafo maraina ho an'ny ankizy. Ho an'ny olon-dehibe, ny doka tsara indrindra dia ny dite mint mafana tokoa. Tsy ho afaka hanandrana iray monja ianao!
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fitsangatsanganana tanteraka » Mamy sy tsindrin-tsakafo marokana mahazatra